fantatra ary izao fa efa miseho indray ao amin’ny distrikan’Antanifotsy ity valan’aretina ity ka tao amin’ny kaominina Ambodiriana no nahitana izany ny herinandro teo ary toa efa tapa-bolana aza no nahitana azy. Olona roa no voaporofo fa tratrany tany an-toerana tapa-bolana lasa teo, ary tamin’ity herinandro hitsahina ity dia mbola nahitana tranga roa ihany koa. Ny karazana aretina “peste bubonique”, na pesta atoditariana moa io miseho any ankehitriny io, raha ny fanazavana azo avy amin’ny talem-paritry ny fahasalamana ao Vakinankaratra, ny Dr Rabenirina Mamitiana Pierre. Efa nisy ny fandraisana an-tanana avy hatrany ireo olona tratry ny aretina, ary tsy nisy aloha hatreto ny aina nafoy. Ankoatra ireo efa marary dia nanaovana hetsika manokana mihitsy ihany koa io distrikan’Antanifotsy io sy ny kaominina Ambodiriana, indrindra ny manodidina ireo olona izay tratry ny aretina, ka nomena ny fanafody mifanandrify amin’izany na tsy mbola tratra aza. Ny aretina pesta, izay nambaran’ity talem-paritra ity, fa ny fahadiovana sy ny ady amin’ny parasy sy ny voalavo no tena fisorohana voalohany indrindra aminy. Tamin’ity taona ity indray izany vao nisy aretina pesta tao Vakinankaratra. Tao anatin’ny 2 taona nifanesy, dia tsy nahitana tranga na iray aza tany an-toerana.